Sidee imtixaanka loogu guulaystaa? (dhegayso) – Radio Daljir
Sidee imtixaanka loogu guulaystaa? (dhegayso)
Luulyo 21, 2018 11:54 b 0
Imtixaanka oo guul waawayn la higsado waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay higsadaan ardayda iskuulada iyo jaamacadaha ee waxbarta, balse waxaa kalle duwan farsamooyinka loo adeegsado guulaha in la xaqiijiyo imtixaanaadka.
Haddaba Siciid Xasan Jaamac oo kaalinta koowaad ka galay imtixaanka kumanaan arday dugsiyada Puntland ayaa ka waramaya, sidii ay ugu suurta gashay inuu kaalinta koowaad ku guulaysto iyo tilaabooyinkii uu qaaday.
Maxamud Fantastic oo ku sugan Qardho ayaana waraystay Siciid oo katirsan ardayda dugsiga sare Najax Bossaso, hoos kadhegayso.
Mid ka mid ahaa ergadii dooratay baarlamaanka oo lagu dilay Baladwayne
Madaxwayne Gaas: “Difaac lagu daray mansab raadin ma guulaysanayso, mana codsan muddo kororsi (dhegayso)
on Xildhibaanada Puntland u matala baarlamaanka Soomaaliya oo dacwad ka gudbinaya Wasiir Goodax Barre (daawo)Wax yar baan ku darsanayaa Reer puntland wax badan baad wax kabaxdeen hadana kunoqoteen Shuruud...